Samachar Batika || News from Nepal » पृथ्वीतर्फ आउँदैछ खतरानाक विशाल क्षुद्रग्रह ठोक्किने सम्भावना !
पृथ्वीतर्फ आउँदैछ खतरानाक विशाल क्षुद्रग्रह ठोक्किने सम्भावना !
आगामी महिना फुटबलको मैदान जत्रो आकारको एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वीतर्फ आउँदैछ । ९ किमि प्रतिघण्टाको वेगले पृथ्वीतर्फ अघि बढिरहेको यस क्षुद्रग्रहमाथि नासाका वैज्ञानिकले नि’गरानी राखिरहेका छन् ।
वि’ध्वं’शका देवता अपोफिस तथा वर्षको सबैभन्दा ठूलो क्षुद्रग्रहको ख’तरा टरिसके पनि अब अर्को एउटा विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वीतर्फ लम्किरहेको छ । फुटबलको मैदान जत्रो विशाल आकारको यो क्षुद्रग्रह 2021 AF8 (Asteroid 2021 AF8) माथि वैज्ञानिकहरुले नि’गरानी राखिरहेका छन् । वैज्ञानिकका अनुसार यो क्षुद्रग्रह मे ४ मा पृथ्वीको नजिक हुँदै गुज्रनेछ ।
नासाका वैज्ञानिकका अनुसार यो क्षुद्रग्रह २६० देखि ५८० मिटरको आकारको रहेको छ । सबैभन्दा पहिले मार्च महिनामा यो क्षुद्रग्रहको बारेमा वैज्ञानिकले जानकारी पाएका थिए ।
नासाका वैज्ञानिकका अनुसार पृथ्वी भएर जाने यस क्षुद्रग्रह 2021 AF8 यसअघि पृथ्वीको नजिक भएर गएका अन्य ठूला क्षुद्रग्रहको तुलनामा भने सानो हो । तरपनि यसलाई ख’तराको हिसाबले कम आँक्न मिल्दैन । नासाका अनुसार यो 2021 AF8 एस्टोराइड ९ किमि प्रतिसेकेण्डको वेगले पृथ्वीको नजिक आउँदैछ ।
वैज्ञानिकका अनुसार पृथ्वीबाट करिब ३४ लाख किलोमिटर दूरीबाट यो 2021 AF8 क्षुद्रग्रह गुज्रिने छ । अपोलो श्रेणीको यस क्षुद्रग्रहलाई वैज्ञानिकले नि’गरानी गरिरहने छन् । नासाले यसलाई सम्भावित ख’तराको सूचीमा राखेको छ ।
नासाको sentry सिस्टमले पहिले देखि नै यस्ता ख’तरातर्फ नि’गरानी गरिराखेको छ । नासाका अनुसार आगामी एकसय वर्षमा आउने २२ वटा यस्ता ख’तरनाक क्षुद्रग्रह छन् जुन पृथ्वीसँग ठो’क्किने सम्भावना रहेको छ ।
यो श्रेणीमा सबैभन्दा अघि र सबैभन्दा ठूलो २९०७५ (1950DA) क्षुद्रग्रह रहेका छन् । यो सन् २८८० सम्म पृथ्वीतर्फ आउँदैन । यसको आकार अमेरिकाको एम्पाएर स्टेट बिल्डङभन्दा तीन गुणा ठूलो छ ।
सूर्यको परिक्रमा गर्ने तर ग्रहभन्दा सानो आकारका च’ट्टानलाई क्षुद्रग्रह भनिन्छ । यस्ता क्षुद्रग्रहहरु मंगल तथा बृहस्पति ग्रहको बीच क्षुद्रग्रह बेल्टमा अत्यधिक संख्यामा रहेका छन् ।
करिब ४.५ अरब वर्ष पहिले जब हाम्रो सौर्यमण्डल प्रणाली निर्माण भएको थियो, त्यसबेला ग्यास तथा धुलोका बादल जसले ग्रहको आकार लिन सकेनन्, ती क्षुद्रग्रहका रुपमा रहे । यस कारण यिनको आकार ग्रह जस्तो गोलो हुँदैन भने कुनै दुई क्षुद्रग्रहको आकार एक जस्तो पनि हुँदैन ।
प्रकाशित मिति २७ चैत्र २०७७, शुक्रबार १२:२७